နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ရေး ပြင်ဆင်ချက် တရားဝင်ထွက်ပေါ်လာမှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဝင် NLDပါတီ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးသံတွေ ကျယ်လောင်နေချိန်မှာပဲ အာအက်ဖ်အေက ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာ သောတရှင် တစ်ဦးရဲ့အမေးကို အခုလို ဖြေကြားလိုက်တာပါ။
ဒါ့အပြင် အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွှတ်ပေးတာကို ငှက်တစ်ကောင် ခြေထောက်ကြိုးတုပ်ပြီး လွှတ်ပေးထားတဲ့ သဘောပဲလို့ အမြင်ရှိတဲ့ သောတရှင်တစ်ဦးရဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေး စလုပ်ကတည်းက ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရွေးပြီး လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲသူမို့ အကျယ်ချုပ်ခံရတဲ့ဘဝမှာတောင်မှ အချည်အနှောင်ခံနေရတယ်လို့ မခံစားခဲ့ရပါဘူး”
အပြည့်အစုံကို မနက်ဖြန်ည ထုတ်လွှင့်မယ့် လူထုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာ စောင့်မျှော် နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
လွတ်မြောက်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီးမြှင့်ခံရ
သာမာန္ျပည္သူတေယက္ပါ။တိုင္းျပည္အေျခအေနဆိူးေနျ႔ပီးအေျပာင္းအလဲတခုလုပ္ရန္လိုေနတာကုိသေဘာေပါက္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လက္ရွိအခင္းအက်င္အတိုင္းဆိုရင္ NLD လြွတ္ေတာ္ထဲေရာက္လဲ ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ ဆိုတာမိ်ုး ဘာမွဟုတ္ဟုတ္ျငားျငားလုပ္နွိုင္စရာမရွိလို့၊ ေကာင္းက်ိုးထက္ဆိုးက်ိုးကပိုပါလိမ့္မည္။ NLD နွင့္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနနွင့္အေလာသံုဆယ္မဆံုးျဖတ္ပဲလူထုအျကားမွာအဆိုးအေကာင္းေျခအတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ လူထုနွိဳင္ငံေရးတခုျပုလုပ္ျပီးမွဆံုးျဖတ္သင့္တယ္လို့ျမင္ပါတယ္။။
Nov 03, 2011 04:26 PM
Be vigilant aunty, there is not yet any specific changed. They just want the sanction to be lifted from US and EU for their own profit as they used to. If NLD wants the support trust from the public as usual the decision making need to be conscientiously done. It would be better if you take the time for solving problems as such political prisoners,non-stop fighting over minorities ethnic people, breaking the dignity&human rights.
Nov 03, 2011 12:49 PM